Posted by blackroze at Tuesday, October 04, 2011
စိတ်ညစ်ရင် ဟာသကား များများ ကြည့်။ ဟာသစာပေတွေ များများဖတ်။ ဒါမှ မဟုတ် ခံစားချက်တွေကို အခုလို ဘလော့ပေါ်တင်ပေးလိုက်။ ဒါဆို နဲနဲ အထီးကျန်ဝမ်းနည်းသိမ်ငယ်စိတ်တွေ ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းမှာ မိမဲလေးလို ခံစားချက် ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အနည်းနဲ့အများဘဲ ကွာမှာပါ။ ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပါဘဲ။ စိတ်ညစ်လိုက် ပျော်လိုက် ၀မ်းနည်းလိုက် ၀မ်းသာလိုက်ဘဲလေ။ လောကဓံကိုး။ ဒါမှလဲ ဘ၀က ရသပေါင်းစုံနဲ့ ကြည်နူးရင်ခုန်ဖို့ ကောင်းမှာ မဟုတ်လား။ အိပ်ပျော်အောင်အိပ်။
မော်လမြိုင်မြို့လေး ညအမှောင်ထဲမှာ အိပ်မပျော်ပါဘူး ညီမလေးရယ် . . . လမင်းကြီးရဲ့ အလင်းရောင်အောက်မှာ မော်လမြိုင်မြို့နဲ့ သံလွင်ရဲ့ အလှကို တောင်ပေါ် View point က ကြည့်ပြီး ခံစားရတဲ့ အရသာဟာ အကိုတို့ မော်လမြိုင်သူ မော်လမြိုင်သားတွေအတွက် ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်တဲ့ အလှတရား တစ်ခုမဟုတ်လား . . .
အခုဆိုရင် သံလွင်နဲ့ ရွှေမြိုင်ရဲ့ အလှတင် မကတော့ဘူး . . တံတာကြီးရဲ့ အလှပါ တိုးလာခဲ့ပြီးမဟုတ်လားး . . .
ဟိုးးးအရင်တုန်းကဆို မော်လမြိင် မုတ္တမ ပြေးဆွဲနေတဲ့ သမိန်ဗရမ်းဆိုတဲ့ ဇက်သင်္ဘော ကိုလည်း သတိရမိပါရဲ့ . . တံတာကြီး ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ . . နှစ်ပေါင်း ၁၀စု နှစ်ကျော် ရွှေမြိုင်သူ ရွှေမြိုင်သားတွေအတွက် တာဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့ သူရော . . ဘယ်သောင် ဘယ်ကမ်းမှာ မောပန်းလို့ နားနေခဲ့ရပြီးလဲ . . . သမိန်ဗရမ်းကိုလည်း သတိရမိပါရဲ့ကွယ် . . .
အကိုဇာတိချက်ကြွေ မော်လမြိုင်ကို အကိုနောက်ဆုံး ရောက်ခဲ့တာ ၂၀၀၈ ကပေါ့ . . . တံတာကြီးပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ရွှေမြိုင်ဟာ ပိုစည်ကားလာပေမဲ့ သိပ်ထွေထွေထူးထူးတော့ မပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး . . . တိုက်ကြီးတွေ သမုဒ္ဒရာကြီးတွေ ဘယ်လောက် ခြားနေပါစေ တိတ်ဆိတ် အေးချမ်းတဲ့ ရွှေမြိုင်ရဲ့ အလှဟာ အကိုတို့ ရွှေမြိုင်သူ ရွှေမြိုင်သားတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဘယ်တော့မှ မေ့ပျောက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး . . . .
မဒမ်ကိုး on4October 2011 at 08:23 said...
တောင့်ထား တောင့်ထား အားလုံးကအတူတူပဲ ညီမလေး
အမဆိုတခါတလေ စိတ်ဓာတ်ကျလွန်းလို့ပန်းခြံထဲ သွားငိုရတယ်
ဒီလိုပါပဲကွယ် ..ဘ၀ဆိုတာ ရေစီးတခါ ရေသာတလှည့်နဲ့
အခြေအနေတွေကြောင့် မိသားစု ချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ ခွဲနေကြရတယ်လေ..
တို့တွေဟာ သူရဲကောင်းတွေပေါ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုသွားပြီး စစ်ချီနေကြတဲ့ သူရဲကောင်းတွေပေါ့ မဟုတ်လား နော် ..
တနေ့ကျလို့ တို့တစ်တွေစစ်နိုင်ရင် အိမ်ပြန်ကြရမှာပါ ...
မြသွေးနီ on4October 2011 at 11:59 said...
ဘ၀ဆိုတာ အမြဲ အနိမ့်အမြင့်အတက်အကျတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ကလေးတစ်လုံးပါ။ ဘယ်အရာမှ မမြဲဘူးဆိုတာ၊ အစိုးမရဘူးဆိုတာကို ဆင်ခြင်နိုင်ရင် စိတ်သက်သာရာ ရလာမှာပါ။ ပျော်ရလည်းတစ်ခဏ၊ ၀မ်းနည်းရလည်း တစ်ခဏ၊ ပူဆွေးရလည်း တစ်ခဏ၊ အားလုံးက တစ်ခဏတာတွေ ချည်းပါဘဲနော်။ တစ်ယောက်ထဲ စိတ်ထဲမှာ ကျိတ်ခံစားမယ့် အစား၊ အခုလို စာတွေချရေးလိုက်၊ သီချင်းတွေ အကျယ်ကြီးအော်ဆိုလိုက်၊ ဒါမှမဟုတ် ဖတ်နေကြမဟုတ်တဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စာအုပ်တွေဖတ်ပစ်လိုက်၊ နောက် အိပ်ယာဝင်ကာနီးတိုင်း တရားလေးရှုမှတ်ကြည့်ပါလား..။ မြသွေးနီ စိတ်တွေ ထွေလာတိုင်း လုပ်တဲ့ နည်းတွေ ပြန်မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်..။
မြတ်မွန် on4October 2011 at 15:00 said...
ပစ်လို့ ပထမဆုံး ခေါ်တာ..
ပစ်ရေ..မွန်လည်း ခု အလုပ်အချိန်ပြောင်းသွားတယ်။
ခေါ်ပြီး တစ်ခုခု စားချင်ပါတယ်တော်..အိပ်နေမှာပဲဆိုပြီး မနှောင့်ယှက်တော့တာ..။
စိတ်မညစ်နဲ့နော်..စိတ်ညစ်တဲ့အခါ အစားများများစား၊ အစားစားချင်စိတ် မရှိရင် ကျယ်မုတွေ ကြည့်ပြီးစားနော်..။
မွန်တော့ တီဗီကြည့်နေရင် အားလုံးမေ့ပဲ...ထိုင်ဝမ်က တီဗီအစီစဉ်တွေ ကြည့်ကောင်းတာပဲ ရယ်စရာတွေရှာကြည့်။။
ဝမ်းနည်းစရာ အတွေးထဲက ရုန်းထွက်လိုက်ပါ ပစ်ရေ..။
ကျန်းမာရေးက စိတ်အဓိက မဟုတ်လား။
အဖော်မရှိရင် မွန့်ကို ဖုန်းဆက်လိုက်နော်..။
jasmine(တောင်ကြီး) on4October 2011 at 17:02 said...
ညီရဲ on4October 2011 at 17:21 said...
နေ့ နဲ့ ည မှားနေတဲ့ တို့ တွေက ဘဝတူတွေပါ သူငယ်ချင်းရေ...
စိတ်ဓာတ်ကျရင်လဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပေးလို့ ကိုယ်တိုင်သာ အားတင်းရမယ် ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ တို့ တွေဘဝက ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးနေရတာလေ...
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..
နောက်တခါ မော်လမြိုင်ကို ပြန်လို့ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေမှာစိုးရင် တစ်ယောက်သော သူကို ခေါ်သွားလိုက်ပေါ့ သူငယ်ချင်း... ဒါဆိုရင် ပျော်သွားမှာပါ...
ချစ်သူမောင် on4October 2011 at 18:08 said...
မနဲ့ အတူ အရာအားလုံးကိုလွမ်းမောခံစားသွားပါတယ်..
မွန် မှတ်မိသလောက်ဆို ကမ်းနားနဲ့ နီးတဲ့ အိမ် မှာ တည်းဖူးတာ
၉တန်း လောက်ကဆိုတော့ တော်တော်ကြာနေပီ ..
ဒါပေမဲ့ ဒူးရင်သီးစားလို့ ကောင်းတာတော့မှတ်မိတယ်..
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! on5October 2011 at 15:00 said...
မမရေ ညီမလေး အကို(ကိုကိုမောင်) ပန်းရနံ့ ပြောသလိုပဲ..စိတ်တွေအရမ်းညစ်လာရင်.. ဟာသတွေကြည့်တယ် သီချင်းတွေ အကျယ်ကြိးဖွင့်ပြိး နားထောင်တယ် အဲလိုဆို နည်းနည်းသက်သာတယ်မမ မဟုတ်ရင် ရင်တစ်ခုလုံး...ပေါက်ကွဲထွက်မတက်ပဲ....
ခံစားနေရတဲ့ စိတ်ညစ်ညမ်းမှုတွေ အမြန်ဆုံး သက်သာလာပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း....
ကြယ်လွမ်းသူ on5October 2011 at 21:50 said...
black ရေ....အသဲမကွဲတဲ့ဆေးထက်ဆိုးနေပြီ :) သီချင်းထဲမှာကြားဖူးတာပါ။ စိတ်ဓာတ်မကျစေတဲ့ဆေးဆိုတော့...အင်း လူတစ်ယောက်ဟာ အိပ်ရေးပျက်တဲ့အခါမှာ သွေးလေလည်ပတ်မှုကပုံမှန်မရှိချင်တော့ဘူးတဲ့... အဲဒီအခါမှာ ခံနိုင်ရည်လည်း လျှော့လာတတ်တယ်ပေါ့။ နောက်တစ်ခုက စိတ်ညစ်တဲ့အခါ အစားအသောက်စားပေးရင်လည်း စိတ်ဖိဆီးမှုကို လျှော့စေတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် အကောင်းဆုံးကတော့ တရားမှတ်တာပိုသင့်တော်မယ်ထင်တာပဲ။ အဲဒါကခက်ခဲနေမယ်ဆိုရင် ယောဂလို ကျင်စဉ်ရှိတယ်။ သူကတော့ နည်းနည်းပေါ့ပါးမယ်ထင်တယ်။ နောက်ဆုံးဘာမှမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင် မတ္တာသုတ်လေး ရွတ်နေတာဟာ စိတ်ဖိဆီးမှုတွေထဲက လွတ်နိုင်တယ်လို့ထင်မိတယ်...။ နောက်ဆုံးနည်းကတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် လုပ်ခဲ့ဖူးပြီး လုပ်နေဆဲ နည်းလေးတစ်ခုပေါ့။
Nyi Linn Thit on6October 2011 at 18:32 said...
မော်လမြိုင် မြို့လေးကို တစ်ခေါက်တော့ ရောက်ဖူးတယ်ဗျ၊ ဖားအံကနေ သင်္ဘောနဲ့ ဆင်းလာခဲ့တာ၊ တကယ် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြို့လေးပါပဲ၊ ညီမ blackroze, စိတ်ဓါတ်ကျနေတယ် ကြားလို့ စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ၊ အပေါ်က ကွန်မန့်တွေမှာ ပေးသွားတဲ့ အကြံဥာဏ်တွေ ကောင်းပါတယ်၊ ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေတာ လုပ်ကြည့်ပါလား၊ အားလုံးကို နည်းနည်းစီ လုပ်လည်း ဖြစ်တာပါပဲ၊ ဟာသကားတွေ ကြည့်ပြီး တရားမှတ်တာဆို ရိုးရှင်းပြီး ထိရောက်မယ် ထင်တာပဲ၊ ပြီးတော့ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မကြာခဏ တွေ့ပေးလို့ ရတယ်လေ၊ ရင်ဖွင့်ပြီး နွေးနွေးထွေးထွေး ပြောပြတိုင်ပင်တာဟာ စိတ်ကို ပေါ့ပါးစေပါတယ်၊ ဝမ်းနည်းအားငယ် စရာတွေက ဘဝမှာ အမြဲလိုလို ကြုံနေကြရ မှာပါပဲ၊ ကျနော်တို့အားလုံးမှာ ဒီလိုအားငယ်စိတ်တွေကို ကျော်လွှားသွားဖို့ စွမ်းအားသတ္တိတွေ ရှိကြတယ်၊ ညီမဆီမှာလည်း ဒီလို စိတ်အင်အားတွေ အပြည့်ရှိတယ်၊ မကြာခင်မှာပဲ စိတ်တွေ ပေါ့ပါး လန်းဆန်းပြီး လမ်းပေါ်မှာ ရင်ကော့၊ ခေါင်းမော့ပြီး လျှောက်နေနိုင်မှာ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်..။
rose of sharon on 8 October 2011 at 09:34 said...
စိတ်ဓာတ်တွေကျတဲ့အခါ အမတော့ ကိုယ့်အပေါ်နားလည်ပေးနိုင်သူနဲ့ စကားတွေအကြာကြီးပြောလေ့ရှိတယ်...
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) on 8 October 2011 at 15:27 said...
အစ်မလည်း မော်လမြိုင်ကို တစ်ခါရောက်ဖူးပါရဲ့
မော်လမြိုင်ကနေ ကျိုက်ခမီကို သွားခဲ့ကြတာ
ပင်လယ်ကမ်းခြေကလည်း လှမှလှ။ ခုပြန်တွေးရင် ပြန်သွားချင်မိတယ်
ညအိပ်ချိန်ဆို ပင်လယ်က လှိုင်းပုတ်သံတွေ စည်းချက်ညီညီကြားရတာ ဘယ်လိုမှန်းမသိဘူး
နားထောင်လို့ကောင်းတယ်.. နောက် ဈေးဆိုင်တွေမှာ ပင်လယ်ကရတဲ့ ကျောက်ပွင့်သုပ်စားရတာလည်း သိပ်ကြိုက်တာဘဲ
ဘုရားတွေပေါတဲ့ မော်လမြိုင်မြို့ထဲမှာ ဘုရားစုံအောင် လိုက်ဖူးရတာလည်း စိတ်ကြည်နူးစရာရယ်။ တောင်ပေါ်ကနေ မြင်ရတဲ့ ရှုခင်းတွေ၊ မော်လမြိုင်တံတားကြီးရဲ့ ရှုခင်းတွေ
ချယ်ရီမြေ on 8 October 2011 at 22:37 said...
လေထန်တိုင်းသာ ပွင့်ကြွေပါမူ၊ ဘယ်မှာ ပန်းများကျန်မည်နည်း။
လှိုင်းပုတ်တိုင်းသာ ကမ်းပြိုပါမူ၊ ဘယ်မှာ မြေကြီးကျန်မည်နည်း။
ကျရှုံးတိုင်းသာ ငိုရပါမူ၊ ဘယ်မှာ မျက်ရည်ကျန်မည်နည်း။
အမှောင်တ၀က် လင်းတ၀က်သည်၊ တရက်တခါ ကြုံမြဲသာတည့်။
ဘ၀သည်ကား တိုက်ပွဲများပင်၊ လှုပ်ရှားရသော လူ့ရွာတောဝယ်
လင်းသောမှောင်သော အောင်သောရှုံးသော၊ မုန်းသောချစ်သော သစ်သောဟောင်းသော
ခွန်အားတစ်ရပ်ဖြစ်ပါစေဟု ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ် blackrozeရေ...
မော်လမြိုင်ကို သုံးလေးခေါက်ရောက်ဖူးပါရဲ့။ မှိုင်းမှိုင်းညို့ညို့နဲ့ လှပတဲ့မြို့လေးပေါ့။ ရေစီးသန်တဲ့သံလွင်ကိုဖြတ်တော့လဲ တအံ့တသြနဲ့။
blackrozeရေ... ကျနော်တို့လဲ မိဝေးဖဝေးနဲ့ တခါတလေ အထီးကျန်မိပါရဲ့။ ငါဒီမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲလို့လဲ အခါခါတွေးမိသေးတယ်။ လိုချင်တာတွေရှိနေသေးလို့၊ အိမ်ပြန်ချိန်မတန်သေးချိန်မှာတော့ အတက်နိုင်ဆုံး ပျော်အောင်နေပါဗျာ။ ဇာတ်ကားတွေ ကြည့်ပစ်လိုက်။ ညဖက်ဆို အားနေရင် အခန်းရှင်းပစ်။ တီဗွီကိုလည်း ဖွင့်ထားဗျာ။ ဒီလိုမျိုး အမြဲကြုံရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခဏလေးပါ။ ကိုယ်ချင်းစာစွာဖြင့် အားပေးသွားပါတယ်ဗျာ။